Madaxweynaha Philippines Oo Ka Dhabeeyay Hanjabaad Uu Horey Ugu Jeediyay Mareykanka - Ilays News
[ March 28, 2020 ] Akhriso Magac-yada Xildhibaanada Ogolaadey Iyo Kuwa Diiday Labadii Xubnood Ee Mucaaridku U Soo Xuleen Kominshanka	Featured
[ March 28, 2020 ] ” Muuse Biixi Iyo Xisbiyada Mucaaridku Heshiis Qarsoodi Ah Bay Galeen Maanta …” Boqor Buurmadow + [ Muuqaal ]	Featured
[ March 28, 2020 ] Ciro Iyo Faysal Oo Ka Hadley Go,aankii Golaha Wakiilada Ku Diideen Xubnahoodii Kominshanka Doorashooyinka + [ Muuqaal ]	Featured
[ March 28, 2020 ] Madaxweynaha Somaliland Oo Ka Hor Yimid Nidaamka Dayn Cafinta Somaliya + [ Muuqaal ]	Featured
[ March 28, 2020 ] Golaha Wakiilada Oo Diiday Xubnihii Mucaaridka Ee Kominshanka Doorashooyinka + [ Muuqaal ]	Featured
Madaxweynaha Philippines Oo Ka Dhabeeyay Hanjabaad Uu Horey Ugu Jeediyay Mareykanka
February 12, 2020 admin1
Dowladda Philippines ayaa si rasmi ah Mareykanka ugu wargelisay in aysan cusbooneysiin dooniin heshiiska dhanka ammaanka ee ay wada galeen labada dal.
Heshiiskaas ayaa ciidamada Mareykanka u oggolaanaya inay ku tababartaan gudaha dalka Philippines, ayna dhoolatus wadajir ah la sameeyaan ciidamada milateriga ee Philippines.
Madaxweynaha dalka Philippines, Rodrigo Duterte ayaa horay ugu hanjabay in uu ka weecan doona xiriirka taariikhiga ah ee uu la lahaa Mareykanka, waxaana uu intaa raaciyay in uu la shaqeyn doonaa Shiinaha.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Philippines ayaa bartiisa Twiter-ka ku qoray in ogeysiis rasmi ah oo ku saabsan xilliga uu ku egyahay heshiiskii dhanka ammaanka la siiyay Dowladda Mareykanka.
Ogeysiiska la siiyay Mareykanka ayaa ka bilaabanaya xilliga la siiyay, wuxuuna ku egyahay wakhtiga uu dhacayo heshiiskii hore ee ay wada galeen.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in arrintan ay saameyn doonta xiriirka soo jireenka ah ee labada dal.
Bishii lasoo dhaafay, madaxweynaha dalkaas, Rodrigo Duterte ayaa ka digay in uu kansali doona heshiiska dhanka amniga ee ay wada galeen Mareykanka, kadib markii Mareykanka uu dal ku gal u diiday dad ay saaxiibo yihiin Madaxweynaha.
Ninka dal ku galka loo diiday oo lagu magacaabo Ronald dela Rosa ayaa lala xiriirriyay ololihii ka dhanka ahaa maandooriyaha, kaas oo kumanaan qof oo lagu eedeeyay inay ka ganacsadaan daroogada lagu laayay.
Madaxweynaha aana gabanin ee dalkaas ayaa dhowr jeer ka hadlay mustaqbalka heshiisyada ay dalkiisa wada galeen Mareykanka tan iyo markii uu awoodda yimid sanadkii 2016-ka.
Dowladda Mareykanka ayaa qorsheyneysay inay ballaariso saldhiga ciidan ee ay ku leedahay dalka Philipines Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga ee dalkaas ayaa horay u sheegay in xukuumadda Washington ay halkaas ka dhisi doonta garoomo milateri, guryo iyo xarumo ciidan.